Onyinye NdFeB Igwe Ọdụdọ, China Nkọtara NdFeB Igwe Ọdụdọ Manufacturers, Suppliers, Factory - QIANGSHENG magnet CO.
Imee NdFeB Ime Ebube
Emebere ndị ndọta NdFeB site na ijikọ ntụ ntụ NdFeB ngwa ngwa. A na-agwakọta ntụ ntụ na resin iji mepụta magnet site na mkpakọ na ịkpụzi ya na epoxy ma ọ bụ ịrịa ọrịa naịlọn. Usoro nke ikpeazụ dị irè na mmepụta nnukwu olu, ọ bụ ezie na uru magnetik nke ngwaahịa dị ala karịa nke ejiri mkpụkọta mkpakọ n'ihi ntakịrị njupụta. A na-emepụta ụdị dị iche iche nke oke ogo dị elu na-enweghị nhazi ọzọ. N'elu na-emeso epoxy mkpuchi ma ọ bụ nickel-plating iji gbochie corrosion
Site na ihe dị iche iche nke ihe mgbakwunye na NdFeB ntụ ntụ, magnetik Njirimara nke ngwakọ NdFeB magnets nwere ike ị na-ege ntị n'ọtụtụ dịgasị iche. Ozugbo akara ruru, enwere ike ịme magnetik na ụlọ akụ dị warara. Ngwakọta ngwakọ ga-ezute njirimara ndị akọwapụtara nke ndị ahịa.
Ngwa ngwa NdFeB kpochapụrụ ntụ ntụ ejiri maka magnets jikọtara ọnụ bụ ọka buru ibu na oke ọka nke sub-micron. Ntụ ntụ bụ isotropic na magnetik Njirimara, nke utịp ke flat ala nke remanence na intrinsic coercivity na etinyere ubi. Igwe Ọdụdọ pụrụ nanị magnetized ka saturation na elu ubi.
Uru nke Igwe Ọdụdọ
* E mepụtara ya na arụmọrụ dị elu, nkwụsi ike na ikwughachi ya.
* Igwe Ọdụdọ na akụkụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ọnụ n'otu aka.
* Nhọrọ nhọrọ nke magnetizing direction-karịsịa maka ngwa multi-polar
* High akụkụ ziri ezi-nnukwu ibu ngwa na nke kacha nta post-pịa machining.
* Mkpa-mgbidi mgbanaka na mgbagwoju udi nju.
* Nnukwu iguzogide corrosion.
Njikọ NdFeB nju (Ọgwụ akpụzi)
Ahụkarị Magnetik Njirimara
ọkwa Max. Ngwaahịa Ike Ntughari Ike mmanye Rev. Temp. Coeff. Na-arụ ọrụ Temp. njupụta
(BH) kacha Br Hc Hci Bd Hd Tc D
MGOe kJ / m3 T kOe kA / m kOe kA / m % / Celsius % / Celsius ° C g / cm3
Njikọ NdFeB nju (Mkpakọ Njikọ)
ọkwa Max. Ngwaahịa Ike Ntughari Ike mmanye Rev. Temp. Na-arụ ọrụ Temp. njupụta
(BH) kacha Br Hc Hci Bd Hd Tw D